योगेश भट्टराईको प्रश्न - नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्वी सुब्बाहरू पिल्सीनु पर्ने हो ? Canada Nepal
योगेश भट्टराईको प्रश्न - नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्वी सुब्बाहरू पिल्सीनु पर्ने हो ?
काठमाडौं - गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता भट्टराईले नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबकै कारण गण्डकीमा एमालेले सत्ता गुमाउनु परेको बताएका छन् ।
उनले नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्वी सुब्बाहरू पिल्सीनु पर्ने हो रु भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले सबै प्रदेशमा पार्टीका काम कार्वाहीको पुनस् संरचना गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन् - 'नेताहरुको अहंकार र शक्तिको टकराबमा कति पृथ्वी सुब्बाहरू पिल्सीनु पर्ने हो ? ईन्द्रलाल सापकोटा र बिष्णु पन्थी जस्ता कतिले सत्ताको तिरस्कार सहनु र अग्नी परिक्षामा सामेल भईरहनु पर्ने हो ? सबै प्रदेशमा दलका काम कार्वाहीको पुन: संरचना गर्न ढिला नगरौ !'
शनिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेपाली नियुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत दावी गर्ने सदस्यको रुपमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
जेठ ३०, २०७८ आइतवार १२:५१:०० बजे : प्रकाशित